Featured Blog Posts – June 2015 Archive (6)
बैतडीमा योजनाहरुको अनुगमन कार्य जारी
बैतडीमा जिल्लाभरी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायद्वारा चालु आर्थिक बर्षमा संचालित योजनाहरुको अनुगमन गर्ने कार्य आज पनि जारी रहेको छ । अनुगमन टोलीले आजपनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा योजनाहरुको अनुमगन गरेको अनुगमन समितिले जनाएको छ । अनुगमन गर्नेक्रममा गोकुलेश्वर मठैराज सडकखण्डको अनुगमन गरिएको छ ।
१५ मिटरको सो सडकको निर्माण कार्य जारी रहेको त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन अनुगमन समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै जिल्ला विकास समितिको साढे पाँचलाखको लागतमा निर्माण गरिएको गोकुलेश्वर डिलाशैनी…
Added by indrasara khadka on June 28, 2015 at 8:00pm — No Comments
रोल्पा र ‘युद्ध पर्यटन’ योजना
दाङ घोराहीबाट उकालो चढेपछि केही घण्टामै रोल्पाको होलेरी बजार आउँछ । २०५२ साल फागुन १ मा तत्कालीन माओवादीले प्रहरी चौकी आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको होलेरी प्रहरी चौकीको भग्नावेश पनि बजारभित्रै पर्छ । यहाँ पुग्दा सबै देख्न सकिन्छ र तत्कालीन युद्धको सम्झना गर्न सकिन्छ । युद्धकालदेखि नै निर्माण थालिएको ‘सहिद मार्ग’ को दाङ-थबाङ खण्ड अन्तर्गत पर्ने होलेरी बजारमै रहेको प्रहरी चौकी कहाँ थियो भन्ने थाहा हुन्छ यहाँ पुग्दा । तर कस्तो थियो भन्ने जानकारी चाहि छैन । हुन सक्दैन ।…
Added by Kashiram Dangi on June 16, 2015 at 6:00pm — 1 Comment
On the Lap of Nature !
Sitting on the lap of nature, there I was.
Adrenaline of emotions rushing through the veins.
Laying down beneath the blue sky, there I was.…
Added by Manoj Bohara on June 15, 2015 at 2:00pm — No Comments
दिल्लीको नेपाली ठग
अपोलो अस्पतालको चौथो तल्लाको बेड नम्बर ३२। म,आमा र दाई, बुवाको उपचारको लागि दिल्लीमा थियौं। बुवा,आमा र दाई काठमाडौंबाट आउनु भएको थियो म भने अमेरिकाबाट सिधै दिल्ली आएको थिए। बुवाको पहिलो चरणको किमो सकिएको करीब पाँच दिनपछि हाम्रो वार्डमा एकजना ४०/४५ बर्षको नेपाली जस्तै देखिने ब्यक्ति दाईको साथमा आए। ती ब्यक्ति मेरो अन्दाज जस्तै नेपाली नै रहेछन् । झापा घर बताउने ती ब्यक्तिले बुवाको स्वास्थ्य अबस्थाबारे धेरै चासो दिए जस्तै गरी कुरा राखे। उनको प्रस्तुतीहरु सुन्दा र देख्दा वास्तब मै तिनी निकै…
Added by Bishwa Chautari on June 8, 2015 at 10:00am — No Comments
बाबुरामले दिनभरी ढुङ्गा बोकेको अनि प्रचण्डले गलले खन्दा अग्नी सापकोटाले माटो निकालेको समाचारहरु संचार माध्यममा छाउँदा नेपालमा पनि परोपकारको प्रतिस्पर्धै सुरु भएको प्रष्टै देखिन्छ । भूकम्पले ल्याएको एउटा सकारात्मक परिवर्तनको रुपमा यो परोपकारी प्रतिस्पर्धालाई पनि लिन सकिन्छ । सुरुमा सबै हताहत भएपनि पछिका दिनमा राहतमा अघि सरेका अनि उद्धारमा लागेकाहरुको तस्वीरले सामाजिक सञ्जालका भित्तो कहिल्यै खाली भएन । यसका बारेमा अनेकानेक टिका टिप्पणीहरु पनि सुरु भए । सानो सहयोग गरेर बढि प्रचार गरेको भन्ने…
Added by Raman Paneru on June 6, 2015 at 1:00pm — No Comments
Added by Basant Sharma on June 2, 2015 at 3:00pm — No Comments